Alluter Technology (Shenzhen) Co., Ltd dia iray amin'ireo mpitarika sputtering nokendrena mpanamboatra ao Shina. Efa naorina tamin'ny taona 2007, ary niely haingana be ho orinasa 200 no mampiasa miampy mpiasa mitarika ny ekipa fitantanana za-draharaha.
Misy dimy famokarana faladiany ho ambanin'ny tanteraka-fananana orinasa (ranon-dra fanafody Factory, Sendikà-mafy Machine amin'ny fambolena Factory, Fikarohana sy ny Fampandrosoana Foibe, Large Non-fenitra mamokatra Factory, Refractory Material Factory) .Giving milalao ho an'ny orinasa rehetra asan'ny samy hafa fitaovana mba hahatratra ny tena matihanina dingana rohy rojo, nandrakotra ny lafiny rehetra amin'ny famokarana ampinga lehibe.
ALLUTER dia afaka manolotra ny tsara indrindra toetra tsy fahita firy vy sy ny tsy ferrous vy ny tanjona, isan-karazany ny firaka ara-nofo tanjona, tanimanga lasibatra, vovoka sy granule ny tanjona, lehibe ahitana Cr, Ti, Sus, Si, Sn, C, Ito, NiCr, Tial, SiAl , Cr + Cu nampikambana, afa-tsy, ihany koa dia nanome ny kendrena sy nampikambana metallization fanompoana.
ALLUTER mijoro ao ambadiky ny vokatra, ny vokatra dia tsara laza amin'ny SGS, MSDS, RoHs, hahatratrarana USA Market, Aisa Market, ary Eoropeana Market.
Ny tanjon'ny orinasa dia ny ALLUTER izay hamonjeny ny kilasy voalohany nokendrena Sputtering vokatra sy afa-po sarobidy ny fanompoana ho any amin'ny mpanjifa, dia aoka isika ho tonga mpanjifa matihanina soatoavina.
Minoa ALLUTER sputtering lasibatra voalohany no ho safidy ny sputtering mpamatsy kendrena!
Miely Alluter fahaiza drafitra in 2017-2018
Alluter orinasa dia fanitarana Rotary lasibatra famokarana fahafahana ao Shina tamin'ny 2017. Oct hampitombo ny fanitarana fahafahana amin'ny 80% any Guizhou orinasa. Ny fahafahana bebe kokoa dia hanampy Alluter hanohana ny haingana h ...